Shirkadda Samsung oo xafiis joogto ah ka furatay Caasimadda Muqdisho (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shirkadda Samsung oo xafiis joogto ah ka furatay Caasimadda Muqdisho (SAWIRRO)
Shirkadda Samsung oo xafiis joogto ah ka furatay Caasimadda Muqdisho (SAWIRRO)
Agaasimaha technologiyada Gobolka Banaadir Eng. Yabaroow oo kamid ahaa masuuliyiintii kahadashay munaasabada daahfurka ayaa ku amaanay dhalinyarada latimid howhsaan iyo bangiga Salaam Somali Bank oo isna maalgaliyay waxaana uu sheegay in ay tahay arin aad loogu baahnaa.
Agaasimaha guud ee wasaarada boosta isgaarsiinta iyo tichnologiyada dowlada federaalka soomaaliya. Cabdi Casiis Duwane oo xariga kajaray xaruntan ayaa soo dhaweeyay furitaanka xaruntan isagoo bogaadiyay ganacsatadii latimid fikirka ah in dalka lakeeno mid kamid ah shirkadaha ugu waaweeyn ee adduunka.
Previous articleJubbaland oo taageertay shaqo joojinta Taliyihii NISA, Fahad Yaasiin
Next articleRooble oo la kulmay Taliyaha KMG ee NISA, Bashiir Goobe (SAWIRRO)